90 ° intukuthelo fitting
Flat ipuleti kufaneleka
U balolonge kufaneleka
umumo Z fitting
Haiyan Hama Hardware Co., Ltd. (HMSTRUT) yasungulwa ngo 2002, esemgwaqweni Haiyan County ---- maphakathi umfula iYangtze River Delta. Thina ahlanganise indawo engaba 27000 square metres, sesinamaqembu abasebenzi abangaphezu kuka-200, kuhlanganise 16 onjiniyela, abaphathi 46. Futhi thina wasungula i-Nyakatfo Melika Service Centre e-Canada.
HMSTRUT kuyinto nomkhiqizi professional kanye isithekelisi okungukuthi ngiwukhathalela ucwaningo, ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa ukufakwa ohlelweni. Imikhiqizo eziyinhloko: isiteshi nut, isiteshi isiteshi kufaneleka, ipayipi izibopho, fastener nokunye.
HMSTRUT elandela inqubomgomo kwamakhasimende yokudlondlobala, ikhwalithi-lokuqala nokuphepha endaweni inhloso phezulu ebangeni, ukuthuthukisa imikhiqizo emisha kanye ekwandiseni ensimini entsha. Igatsha lethu kahle futhi omuhle kakhulu ukulawula izinga kulo zonke izigaba ukukhiqizwa kusenza sikwazi ukuqinisekisa totao ukwaneliseka amakhasimende. Ngaphandle kwalokho, sesamukele ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE futhi UL.
HMSTRUT ithatha "UKUPHEPHA, UKUTHEMBEKA, ukusebenza kahle, UKUNIKEZELWA, LOKUSUNGULA, WINA-WINA" njengoba amanani inkampani. Manje imikhiqizo yethu baziswa kakhulu kunoma tinhlobo letehlukene tetintfo letingemadayimenshini emhlabeni wonke, ezifana eYurophu, eMelika naseJapane.
Kuhloswe ukuba umholi imboni ukufakwa izinhlelo.
No.388 North Zhenzhong Road, Shendang Town, Haiyan City, eSifundzeni Zhejiang, China 314311
© Copyright - 2010-2022: Wonke Amalungelo Agodliwe. Amathiphu - Imikhiqizo Zezıhlabane - Ibalazwe - AMP Ucingo
Angular lokulinganisa , Strut Channel Nut Without Spring, Jikelele lokulinganisa , Isiteshi Nut, Channel lokulinganisa , Isiteshi T Plate Onengqondo,